Muuri News Network » XOG: Liibaan M/weyne oo Dil toogasho ah ku Xakuman iyo Dhaawaciisa oo la diiday in itoobiya loo qaado..
XOG: Liibaan M/weyne oo Dil toogasho ah ku Xakuman iyo Dhaawaciisa oo la diiday in itoobiya loo qaado..
Iyadoo Sabtidii lagu waday in dhaawaca Horjooge (Liibaan Madaxweyne) dhaawaciisa loo qaado Magaalada Addis Ababa, ayaa waxaa soo baxaaya warar sheegaaya inay is hortaagtey Dowladda Somaliya.
Liibaan Madaxweyne oo ku dhaawacmay dagaalkii Arbacadii ka dhacay Magaalada Dhuusamareeb, ayaa la geeyay Deegaanka Feer Feer, si ay diyaarad uga qaado, dhaawaciisuna loogu dabiibo Magaalada Addis Ababa.
Mursal Maxamed Yuusuf Xeefow oo ka tirsan Saraakiisha Maamulka Ahu Sunna, ayaa sheegay in Maamulka Gobolada Dhexe (Ahlu Sunna) uu Dowladda Itoobiya ka codsaday in dhaawaca Horjooge Liibaan lagu dabiibo Magaalada Addis Ababa, balse ay taasi ka hortimid Dowladda Dhexe Somaliya, isla-markaana ay Itoobiya weydiisatay in ay ninkaasi u soo gacangeliso.
“Maamulka Gobolada Dhexe, ayaa Dowladda Itoobiya ka codsaday dhaawaca Liibaan in loo qaado Magaalada Addis Ababa, wayna naga aqbashay. Waxaana laga qaaday Dhuusamareeb oo waxaa la geeyay Feer Feer, si ay uga qaado diyaaraddii gayn lahaa Addis Ababa.” Ayuu yiri Mursal Maxamed Yuusuf Xeefow oo la hadlay Wabaahinta.
Waxaa uu intaa ku daray “Arrintii ayay maqashay Dowladda Somaliya, waxayna Itoobiya ka dalbatay inaanan loo qaadin Addis Ababa, Dowladana loo soo gacangeliyo. Waxay leeyihiin waa nin dembiile qaran ah, maaha in Addis Ababa loo qaado, waa in Xamar la keennaa.”
Ina Xeefow, ayaa ku waramaaya in Maamulka Ahlu Sunna uu ka biyo diiday in Horjooge Liibaan Madaxweyne loo gacangeliyo Dowladda Somaliya, isla-markaana uu Saraakiisha Itoobiya ku wargeliyay in dib loogu soo celiyo Dhuusamareeb.
Xeefow, ayaa sababta ay u diidan yihiin in loo gacangeliyo Dowladda Somaliya waxaa uu ku sheegay, Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida oo dil toogasho ku xukuntay, sida uu yiri.